US မှာဆက်သွယ်ရေး | USAHello | USAHello
ဆက်သွယ်ရေးကျနော်တို့အခြားလူများနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်နှင့်အိုင်ဒီယာများကိုမျှဝေပုံ. ကျနော်တို့စကားပြောနေဖြင့်ထိုသို့ပြု, စာအရေးအသားအားဖြင့်, ပင်ကိုငါတို့လက်နှင့်အတူ, မျက်နှာ, နှင့်အလောင်းများကို. အသစ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတွင်းရှိ, ကျနော်တို့ဆက်သွယ်နည်းလမ်းသစ်တွေကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်. ဒီနေရာတွင် USA တွင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကူညီပေးဖို့တချို့အကြံပေးချက်များများမှာ.
ယူအက်စ်အေ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးလအတွင်း, သငျသညျလူများနှင့်အခြေအနေများနားမလည်ဘူးတဲ့အခါမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မည်. ဤသည်အလွန်ခက်ခဲသည်, ဒါပေမယ့်လည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ပျက်အားလျော့ခံရဖို့မကြိုးစားပါ! ဆက်သွယ်ရေးအချိန်နှင့်အတူပိုကောင်းလိမ့်မယ်. သငျသညျသစ်ကိုယဉ်ကျေးမှုမှအသုံးရဘာသာစကားကိုနားလည်ရန်စတင်ပါလိမ့်မည်.
သငျသညျသစ်တစ်ခုနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိသည့်အခါ, ဘာသာစကားကိုမသိအရာရာခက်ခဲစေသည်. ဤတွင်အမေရိကန်များနှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်အကြောင်းကိုသိရန်အချို့သောအသုံးဝင်သောအရာဖြစ်ကြ၏.
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနေကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးလပေါင်းများစွာစဉ်အတွင်း, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသောအရာတို့ကိုစာရေးနားလညျမှုလှဲမှားပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အမှားကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်. အပြုသဘောဖြစ်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ - တစ်ယောက်ယောက်ကိုရိုင်းစိုင်းသို့မဟုတ်ယုတ်ပုံပေါ်လျှင်, ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုကွာခြားချက်၏ဖြစ်မည်အကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေး. သူတို့တစ်တွေမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းမယူဆပါနဲ့.
• သူတို့ဟာဖြစ်နိုင်သည် “နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သော။” လူတွေတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အုပ်စုတစ်စုကိုမှားယွင်းလိမ့်မည်ဟုအမှုအရာလို့ပြောဖို့မကြိုးစားနိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ခြင်း. ဥပမာ, အများအပြားအမေရိကန်တွေလူမျိုးရေးခွဲခြားသို့မဟုတ်လိင်အရအခွင့်အရေးပြက်လုံးသညျးမခံပါဘူး. ဤသည်မှန်ကန်မှုတစ်ခုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်. အခြားသူများကိုမလေးစားလျှင်ဒါပေမယ့်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးပြဿနာမလိုဘဲအကြောင်းပြောဆိုရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအကြောင်းအရာများရှိပါတယ်. ယဉ်ကျေးမှုများမှာကလေးများနှင့်အားကစားကိုဖြတ်ပြီးဘုံဒေသများ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောနေတာတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဤအအကြောင်းအရာများအကြောင်းပြောဆို!
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားစကားပြောပါလိမ့်မယ် “သေးငယ်တဲ့ဟောပြောပွဲ” မင်းနဲ့အတူ. သူတို့ကသင်ပုံကိုမေးပါသို့မဟုတ်ရာသီဥတုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်. ဒါဟာယဉ်ကျေးစဉ်းစားသည်. တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါတယ် အကယ်., “နေကောင်းလား?” အခြားလူတစ်ဦးနီးပါးအမြဲပြောပါတယ်,”ကောင်းသော,” “ကောင်းသော,” သို့မဟုတ် “အိုကေ,” သူသို့မဟုတ်သူမဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်မမှန်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်.
USA တွင်, လူတွေပြောပါ “ကျေးဇူးပြု” သူတို့တစ်ခုခုတောင်းသောအခါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” သူတို့တစ်ခုခုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုကူညီပေးသည်သည့်အခါ. အမေရိကန်တွေပင်နည်းနည်းအရာများအတွက်အခြားသူများကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လေ့. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်ပွင့်လင်းတဲ့တံခါးကိုရရှိထားသူပါလျှင်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျလက်ဆောင်တစ်ခုပေးသည်ဆိုပါက, သင်သည်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောသင့်ပါတယ်.
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသင် USA တွင်ဘဝမှညှိကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. သငျသညျအများကြီးအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုရငျ, သင်အွန်လိုင်းနှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အခမဲ့အတန်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူ သို့မဟုတ် သင့်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်း.
အသစ်တခုဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအထဲတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့်ကအများကြီးနားမထောငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားထောငျနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးစား. အသံထွက်, သို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာအမှုအရာဟူမူကား, အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့လေသံနှင့်အရာစကားသည်သင်ကိစ္စကိုလည်းအလေးပေးပြောကြား. သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာတစ်ခုခုပြောနေကြောင့်သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်ခံစားရစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အမေရိကန်တွေသငျသညျနားမလညျနိုငျပါသညျ. အားလုံးအမေရိကန်တွေနိုင်ငံခြားအသံထွက်ဖို့အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်.
ကျနော်တို့အခြားလူများနှင့်အတူတွဲရှိတဲ့အခါ, ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအရေးပါသည့်နည်းလမ်းဆက်သွယ်ပြောဆို: နှုတ်ဖြင့် (စကားများသုံးပြီး) နှင့် nonverbally. Nonverbal ဆက်သွယ်ရေးကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုလမ်းကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာပါဝင်သည်:
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအရေးကြီးသောပြောဆိုမှုများစဉ်အတွင်းမျက်လုံးချင်းအောင်. သငျသညျမျက်လုံးချင်းလုပ်မထားဘူးဆိုရင်, ကလူကိုသင်လဲလျောင်းနေကြသည်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်ထင်စေခြင်းငှါ. သင်၏မျက်စိသို့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုမကြာခဏပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်, ဉာဏ်ကောင်းသော, နှင့်မျိုး. သငျသညျလူရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမျက်စိကိုသို့ကြည့်ရှုကြပါဘူးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလာနေလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့လုပ်ဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း.
Americans smilealot to be polite and to show that everything is okay. သငျသညျသစ်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ, သူတို့သူတို့ကိုသင်မှာပြုံးဖို့မျှော်လင့်ထား.
USA တွင်, လူတွေကိုပိုရှိသည် “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသ။” သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှစကားပြောနေကြသည်လျှင်ဒီကိုဆိုလိုတယ်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးခြေမကွာသင့်ထံမှအနည်းဆုံးအားမတ်တပ်ရပ်ဦးမည်.
အမေရိကန်တွေအမျက်ဒေါသ၏ထွက်သို့မဟုတ်ရန်ပွဲဖို့မငြင်းခုန်, သူတို့မှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဘယ်ကြောင့်သင်တို့မူကားကိုပြသ. Argus ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်လက်ခံသည်, သငျသညျအလွန်ကျယ်လောင်စွာစကားပြောနေကြသည်မဟုတ်လျှင် (အော်ဟစ်) သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းဘာသာစကားကိုသုံးပြီး. ကျောင်းသားများခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ပင်၎င်းတို့၏ဆရာများနှင့်အတူသဘောမတူရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်. ကလေးများဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူငြင်းခုန်စေခြင်းငှါ. အလုပ်သမားများကသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေသဘောမတူနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး. တခါတလေ, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာ, လူတွေကိုဘာမျှမအမှုကိုပြုရနိုင်အောင်အများကြီးငြင်း!
မိန့်ခွန်း၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်. ဒီအတွက်ကြောင့်, အမေရိကန်မီဒီယာများကအခြားနိုင်ငံများတွင်လူဦးအကြောင်းကိုပြက်လုံးမပြုစေခြင်းငှါအမှုအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြက်လုံးစေနိုင်သည်. ဥပမာ, ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအမေရိကန်သတင်းစာတွေရှိပါတယ် “ပြက်ရယ်စကား” သတင်းစာများ - သူတို့သရော်စာသို့မဟုတ်ရယ်စရာကြောင်းသတင်းရေးရန်, ဒါပေမယ့်မစစ်မှန်တဲ့. ဥပမာ, အဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်သရော်စာသတင်းစာစက္ကူ ကြက်သွန်နီ မြောက်ကိုရီးယား၏နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြောင်းပုံပြင်ကိုရေးသားခဲ့သည်. သူတို့ကသူကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးချောမောလူကိုမဲပေးခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်. မြောက်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်အတွက်အချို့လူများကဇာတ်လမ်းစစ်မှန်တဲ့ထင်. ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကမယ့်ဟာသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်.
USA တွင်, တချို့လူတွေကရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာဟာသစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ်. သူတို့ကအစတီဗီပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ကလပ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူရွှင်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ်စေခြင်းငှါ,. တခါတလေ, အမေရိကန်ဟာသနှင့်လူရွှင်တော်ထိုးစစ်နိုင်ပါတယ်.
US မှာ, ကျမ်းစာ၌ရေးထားစာချုပ်များနှင့်နှုတ်သဘောတူညီချက်များအရေးကြီးလှသည်.
နှုတ်သဘောတူညီချက်များနှင့်အတူတစ်ခုမှာပြဿနာတစ်ခါတစ်ရံလူတွေကိုနားလည်မှုလွဲနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဥပမာ, သင်မှာသူတို့ကိုဆီးကြိုလိမ့်မည်ဟုသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူတစ်နှုတ်သဘောတူညီချက်စေ5ညနေထိုနေ့ရက်သည်. ဒါပေမဲ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်သင်နက်ဖြန်နေ့၌အဓိပ်ပာယျထငျ.
သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုရန်သဘောတူခဲ့လျှင်, သင်သည်ထိုသဘောတူညီချက်ဖြည့်ဆည်းဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုသင်သဘောတူညီချက်ဖြည့်စွက်လို့မရဘူးအသိပေးကြောင်းဖြစ်စေကြောင်းအမေရိကန်တွေရန်အရေးကြီးပါသည်က. ဤသည်ကိုပင်သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုများအတွက်မှန်. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကနေ့လယ်စာရှိသည်နှင့်သင်ဟုတ်ကဲ့ပြောသငျသညျတောငျးလြှငျ, သငျသညျနေ့လယ်စာကိုသွားသင့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ကနေ့လည်စာအတွက်အချိန်မီသငျသညျမရောကျနိုငျကသူတို့ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်.
သင်တစ်ဦးစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့လျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကြောင်းစာချုပ်ဖြည့်ဆည်းဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ. ဒါကြောင့်သင်ကဂရုတစိုက်ဖတ်ပါအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. စာချုပ်အင်္ဂလိပ်လိုသည်ဆိုပါက, သင်ကဘာသာပြန်ဆိုအကူအညီတောငျးဖို့လိုပေမည်. ရိုးရှင်းစာချုပ်များအတွက်, သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုမေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်လုပ်နိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့စာချုပ်နားလည်ကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံစိုးရိမ်ခဲ့လျှင်, အလုပ်, သို့မဟုတ်တရားဝင်န်ဆောင်မှုများ, သငျသညျအကွံဉာဏျများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ဆိုသူကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်သင့်အမှုတွဲကိုင်မေးရန်လိုပေမည်.
မရဖြစ်ရပ်မှန် - ဤအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုအမျိုးဖြစ်ကြ၏, အမေရိကန်ကိုသင်အသုံးပြုကြသည်အရာကိုကွဲပြားခြားနားသောလမ်းသရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်သင်ပိုကောင်းနားလည်ကူညီပေးဖို့ပဲစိတ်ကူးများ. အမေရိကန်နည်းလမ်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအခြားနည်းလမ်းများထက်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးမဟုတ် - ပဲကွဲပြားခြားနားသော.